यदि यो रुखमा तपाई जसले नाग (सर्प) देख्नुहुन्छ उसलाई मिल्नेछ चमत्कार ! – My Blog
यदि यो रुखमा तपाई जसले नाग (सर्प) देख्नुहुन्छ उसलाई मिल्नेछ चमत्कार !
No Comments on यदि यो रुखमा तपाई जसले नाग (सर्प) देख्नुहुन्छ उसलाई मिल्नेछ चमत्कार !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा समय समयमा अनेक कुराहरु सर्वत्र फैलिने गर्छन् । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा एक तस्विर निकै फैलिरहेको छ । तस्विर हेर्दा तपाईं पनि सोचनिय अवस्थामा पुग्नु हुनेछ । मानिसहरुलाई त्यस्ता तस्विरहरु धेरै मन पर्छ । अहिले एक तस्वीर चुनौतीसहित इन्टरनेटमा फैलिरहेको छ । यो चुनौती पूरा गरेर, तपाईं आफ्नो आँखा कति तेज छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ ।
यो तस्विर अहिले निकै नै फैलिरहेको छ । तस्विरमा एउटा रुख देखिन्छ । त्यहाँ एउटा सर्प ( snake ) त्यो रुखमा लुकेर बसेको छ । उक्त रूखमा भएको सर्पलाई सजिलै देख्न सकिदैंन् । किनकी रुखका धर्सा र साप उस्तै उस्तै छन् ।
मानिसहरु यो तस्विरमा सर्प खोज्न को लागि धेरै कोशिश गरीरहेका छन् । ध्यान दिएर हेर्दा, त्यहाँ एक सर्प लुकेको छ । मानिसहरु ध्यान दिएर तस्विरमा सर्प खोज्दै छन् । तर केहि मानिसहरु तस्विरमा लुकेको सर्प देख्न सक्षम छैनन् । यो तस्विर आईएफएस अधिकारी सुशान्त नन्दा द्वारा ट्विटरमा साझा गरिएको छ ।
उनले क्याप्सनमा लेखेका छन्, ‘छलावरण यो तस्विर हेरेर तपाईं रूख मात्र देख्नुहुनेछ । तर जब तपाईं ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ, रूखको बिचमा एक सर्प देख्नुहुनेछ ।’ यो तस्विर हेरेर तपाईं आफ्नो आँखाको दृष्टि पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ ।
← दाङमा मलामी गएका व्यक्तिको पनि यसरि भयो दु:खद मृत्यु → २५ बर्षिया सुत्केरी महिलाको मृत्यु